The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: HALGANKII BIMAAL DIR IYO AKISHO IYO WIIL WAAL
Bilowgii qarnigii 19-aad, Garaad Wiil-waal ayaa isaguna wuxuu ku guulaystay in uu ururiyo beelo kala duwan oo ku maamulo xeer-dhaqameedyo uu isagu dejiyay. Taasina waxaa ay ka dambaysay markii uu helay kalsoonidii beeshiisa (Bartire) oo ay caleemo saarteen, markaas oo adeerow uu u caddaalad falay. Garaad Wiil-waal wuxuu ahaa nin geesinimo iyo af-tahannimo loo hibeeyay. Xeerarka uu ku dhaqmo wuxuu dadka ku bari jiray qaab suugaaneed. Tilmaamahaas uu Wiil-waal lahaa ayaa waxay kallifeen in degaankiisii ay ku soo qaxaan beelo dhowr ah oo ku qancay maamulkii uu dhisay. Waxaa kamid ahaa Abasguul, Geri iyo Ogaadeen. Wiil-waal wuxuu dhisay xulufo ciidameed iyo mid siyaasadeed oo ay ku bahoobeen beelahaas. Adeerow kalsoonidii dhex martay Wiil-waal iyo odeyadii beelahaas ayaa waxay adkaysay maamulkii ay isku xulufaysteen. Tix uu Wiil-waal u tiriyay garaadkii beesha Geri oo la oran jiray Garaad Aadan, mar uu uga soo dacwooday beeshii oo ku gadoodday ayuu Wiil-waal ku tilmaamay xiriir! ! ka ka dhexeeya isaga iyo Garaad Aadan. Wiil-waal wuxuu yiri :
Haddaad dowladda waydo anna teydu weydowdey.
Haddii lowgu ku wiiqmo anna waan wakkinaayaa.
Haddaad weer isku jiiddo anna waan isku waabi.
Ciidamadii beelihii is-xulufaystay oo uu hor kacayo Wiil-waal ayaa waxay duulaan ku qaadeen ceelashii reerka Akishe (Dir), halkaas oo lagu dhibi jirey xoolaha ay lahaayeen beelaha aanu soo xusnay. Gulufyadii colaadeed ee uu Wiil-waal dumay waxay sabab u noqdeen in ay guud ahaan beelihii soomaaliyeed ay ku faafaan dhulka biyaha badan ee ku beegan agagaarka degmada Jigjiga, halkaas oo ay ka kacsadeen beelo Oromo ah.
Beelo kamid ah reerka Mareexaan ayaa iyaguna ku soo hayaamay degaanka Gedo, iyo koonfurta gobollada Baali iyo Siidaamo. Xilligaas, qiyaastii 50 sano ayuu ka dambeeyay markii uu bilowday hirarkii hayaanka. Waxaa jiray beelo Mareexaan ah oo safka hore kaga jiray qaxan, waxaana kamid ahaa Howraarsame, Habar-Yaaquub, reer Xasan iyo Talxe. Sheekooyinkii laga dhaxlay da´wayntii hore waxaa ku xusan in beelahaasi ay geel badan wateen. Beelahan waxay ka soo qaxeen meelo kamid ah bartamaha Soomaaliya, waxayna soo mareen gobollada Hiiraan iyo Bakool. Sababta ay la qaxeen waxay ahayd colaado isugu jira kuwo ka aloosmay beesha gudaheeda iyo kuwo dhexmaray iyaga iyo beelihii ay la deriska ahaayeen. Adeerow inkasta oo eeyan isku degaan ka soo kicin misana waxaa la malaynayaa in hayaankii beesha Dagoodiye uu dhinac socday kaa beelaha Mareexaan, sidaasna ay dagaaladii lagu kiciyay reerka Booran ay ka wada qayb qaateen. Dagaaladaasi waxay ahaayeen kuwo lagu hilboobay, waana kuwa sababay in s! ! oomaalidu degaan ku yeelato halkaas. Mar ay Boorantu fadhi ku lahaayeen buurta u wayn degaanka ee la yiraahdo Humbaale ayay soomaalidii u soo tiriyeen tix iyaga oo leh :
Shuun oday waaye
Haddaad ood ka goyso
Aabaa iga dhaartay.
Soomaalidii waa ay ka soo jawaabeen iyaga oo leh :
Haddaad oon ku guurin
Adeerow waxaa kale oo xusid mudan Shiikha la yiraahdo Ibraahim Xasan Yabarow oo dhalashadiisu ahayd Wanla-wayn, kaas dalka ku soo laabtay sanadkii ugu dambeeyay qarnigii 18-aad. Shiikh Yabarow oo ahaa nin ka tirsan dariiqada Axmadiyada ayaa bilowgii qarnigii 19-aad wuxuu aasaasay xarumihii xertii Baardheere ee magaceedu ahaa Jamaacada. Sanadkii 1797-kii ayuu Shiikhu magaalada xurmaysan ee Maka wuxuu kula kulmey Shiikh Axmad Bin Idiriis oo ahaa ninkii aasaasey dariiqada lagu magacaabo Axmadiya. Adeer ! goor dambe ayuu shiikhu wuxuu noqday nin asal raac ah. Wuxuu hoggaamiye ka noqday dhaqdhaqaaq lagu nooleynayo saldhigyada diinta Islaamka. Shiikhu wuxuu qaatay aragti lamid ah tii uu Shiikh Maxamad Cabdi-Wahaab ku baaqay oo ahayd diin aanan barax lahayn dariiqona aanan ku xirreyn. Shiikh Yabarow wuxuu dadka kala diriri jiray tubaakada, heesaha, cayaaraha iyo is-dhex galka ragga iyo dumarka.! ! Wuxuu ka reebi jiray macsida. Wuxuu dadka fari jiray in laga reebtoomo ganacsiga xubnaha duur-joogta. Dumarka wuxuu fari jiray in oogadooda ay asturaan. Guud ahaanna wuxuu dadka u sheegi jiray in ay ku dhaqmaan shareecada Islaamka, cibaadadana ay ku dadaalaan. Shiikhu wuxuu yeeshay xarun u saldhig ah oo uu dadka wax ku baro. Waxaa halkaas ka abuurmay dugsiyo lagu barto noocyada culuumta diinta Islaamka. Sanadkii 1819-kii, tirada ragga ardayda halkaas wax ku baranaysay waxay dhaafsiisnaayeen 100 nin. Sanadkii 1840-kii, tirada xertii Shiikhu waxay kor u dhaaftay 20.000 oo nin, kuwaas oo badankoodu ahaa qolyihii Daaroodka ahaa ee degaanka ku soo hayaamay
Posted by DIRSAME at 7:17 AM